Iibso Libaaxyada Mane, Reishi, Cordyceps, Chaga, Turkey Tail, Maitake, Shiitake No fillers 7 Mushroom Mix Mix Powder - Free Shipping & Tax no | WoopShop®
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Libaaxyada Mane, Reishi, Cordyceps, Chaga Extract Powder
Lambarka Moodalka: G9867
Reishi: Waxaa lagu sharfay Daawada Dhaqanka sida “boqoshaada dhimashada,” Reishi waa mid ka mid ah boqoshaada cuntada ugu caansan oo dhan sababtoo ah faa'iidooyinkeeda caafimaad ee ballaaran. Reishi waxaa ku jira beta-glucans dabiici ah oo xoog leh oo taageera shaqeynta nidaamka difaaca. Dad badan ayaa u arka inay yihiin adaptogen ka sarreeya, Reishi wuxuu la shaqeeyaa jirkaaga si uu gacan uga geysto maareynta walbahaarka jirka, maskaxda, iyo dareenka maalin walba iyo soo celinta dheelitirka hab dabiici ah oo caafimaad leh. Waxaa ku jira maaddo la yiraahdo triterpene, oo caawisa taageeridda iyo habeynta niyadda.
Boqoshaada cuntada oo dhan ee aadka loo cuno waxaa la qaadan karaa wakhti kasta oo maalinta ah iyo qaabab kala doorasho ah - sida budo lagu daro macaan, ruxitaan, qaxwo kulul ama shaah, oo lagu dhex miiriyey boorashka, ukunta, marada, suugada, maraqa, iyo cuntooyinka , sida alaabta la dubay - ama qaab kaabsal ku habboon (budo ama kaabis).
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 4.9 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 127791.
dib u eegista 127791